Vagadziri veiyo RE3 chirongwa chakamhan'arwa neTora-Mbiri Inopindirana | Linux Vakapindwa muropa
Tora-yeVaviri Inopindirana iyo iri yehungwaru pfuma ye mitambo inoenderana GTA III uye GTA Visi Guta, akamhan'arira mhosva ivo vanogadzira chirongwa RE3 (iyo inovandudzwa dombo reGTA III uye GTA VC zviwanikwa zvakagadzirwa nerejinjiniya).
Tora-Two Interactive inoda kuti mumhan'ari amire kugovera kodhi yekodhi yeiyo kunyorwa RE3 uye zvese zvinoperekedza zvinhu, pamwe nekupa chirevo pamusoro pehuwandu hwezvigadzirwa zvinotora izvo zvinokanganisa hunyanzvi hwekambani uye kubhadhara muripo wekuvhara kukanganisa kwemutemo wekodzero.
Nezve chirongwa cheRE3, danho repamutemo ndiro rakaipisisa nyaya mushure mekuvhura yavo GitHub repository, semuna Kukadzi Tora-Mbiri Inopindirana yakachengetedza repodhi yekukiya uye 232 maforogo kubva kuGitHub RE3 chirongwa nekunyora chikumbiro chekutyora Kodzero (DMCA).
Nehurombo isu tine dzimwe nhau dzinopaza dzekuvhara pairi. Kambani yemubereki yeRockstar Tora-Mbiri Inopindirana yakamhan'ara kumatare kune vanhu vari kumashure kweiyo enjiniya chirongwa cheGTA3 neVice Guta, inozivikanwawo seRe3.
Kufaira kunogona kuonekwa panohttps://t.co/MQaASogUGG
— GTA Nhau? RockstarINTEL.com (@GTAonlineNews) September 3, 2021
Vagadziri vacho havana kubvumirana nenharo dzeTora-mbiri Dzinopindirana uye vakamhan'arira chirevo, mushure mezvo GitHub yakasimudza chivharo, kunyangwe kufayinura chirevo chakatakura njodzi yekuti kamwe Tora-Mbiri Inopindirana yapedza sarudzo dzayo Kugadziriswa kworunyararo, unogona kuwedzera kukwikwidza.
RE3 vagadziri tenda kuti kodhi yavakagadzira haitungamirirwe nemitemo yekodzero yezvivakwa, kana kuwira muchikamu chekushandiswa kwakanaka (kushandiswa kwakaringana), iyo inobvumidza kugadzirwa kweanowirirana anoshanda analogues, sezvo chirongwa ichi chakagadziriswa pahwaro hwe reverse engineering uye chete kodhi yekodhi inogadzirwa nevabati inoitirwa munzvimbo yekuchengetera chirongwa. Iwo mafaera echinhu pahwaro hwekuti mashandiro emutambo akagadzirwazve haana kuiswa munzvimbo yekuchengetera.
Kushandiswa kwakanaka kunoonekwawo neicho chisiri-chebhizimusi chirongwa, chinangwa chikuru hachisi chekugovera makopi asina mvumo epfuma yemumwe munhu, asi kupa vateveri mukana wekuenderera mberi vachitamba vhezheni dzekare dzeGTA, kugadzirisa mabugs uye kuvimbisa basa pamapuratifomu matsva.
Sekureva kwevanyori ve RE3, chirongwa chavo hachikuvadze Tora-Mbiri Inopindirana, asi inomutsa kudiwa uye inobatsira mukukura kwekutengesa kwemitambo yekutanga, nekuti kushandisa iyo RE3 kodhi kunoda kuti mushandisi ave nezviwanikwa kubva kumutambo wekutanga.
Zvinoenderana nezvinodiwa yakapihwa naTora-Mbiri Inopindirana, mafaera akaiswa munzvimbo yekuchengetera haana chete sosi kodhi chinotora chinokutendera kuti umhanye mutambo usina kuvapo kwemafaira ekutanga anogona, dzinosanganisirawo zvikamu kubva mumitambo yekutanga, senge zvinyorwa, madhairekitori ehunhu, uye zvimwe zviri mu- mutambo zviwanikwa.
Iyo yekuchengetera zvakare ine zvinongedzo kune yakazara re3 kuisa inovaka, iyo, yakapihwa kuwanikwa kwezviwanikwa kubva kumutambo wekutanga, zvinokutendera kuti unyatsogadzirisa mutambo, uyo, kunze kwezvimwe zvinhu zvidiki, zvisina kusiyana nemitambo yekutanga.
Tora-Mbiri Inopindirana ine yakasarudzika kodzero kubereka, kuita pachena, kugovera, kuratidza uye kugadzirisa GTA III uye GTA VC.
Zvinoenderana nemumhan'ari, kana uchiteedzera, kugadzirisa uye kuendesa kodhi uye zviwanikwa zvinobatana kumitambo iyi, vanogadzira nemaune kutyora Tora-Mbiri Interactive zvinhu zvehungwaru uye ivo vanofanirwa kutsiva kukuvara kwakakonzerwa (vashandisi vanofanirwa kunge vaodhaunirodha yemahara yakaenzana pachinzvimbo chekutenga mitambo yekutanga).
Izvo zvinokurudzirwa kuona huwandu chaihwo hwemuripo mudare, asi zana nemakumi mashanu ezviuru zvemadhora + zvemitemo zvinodakadzwa seimwe yesarudzo. Vapomeri vacho vanokurudzira Angelo Papenhoff (aap), Theo Morra, Eray Orçunus naAdrian Graber.
Iyo re3 projekiti inodzosera-yakagadzira iyo sosi kodhi yeGTA III uye GTA Visi Guta, yakaburitswa makore makumi maviri apfuura. Iyo kodhi yakaburitswa yaive yakagadzirira kuvaka mutambo unoshanda zvizere, uchishandisa mafaera ane nhumbi dzemitambo, iyo yaakatangisa kuburitsa kubva kukopi yake ine rezinesi yeGTA III.
Iyo kodhi yekudzosa chirongwa chakatangwa muna2018 nechinangwa chekugadzirisa mamwe mabugs, kuwedzera mikana yevagadziri vemod, uye kuitisa kuyedza kudzidza uye kutsiva algorithms kutevedzera maitiro epanyama.
Kunyanya, RE3 yakaendeswa kuLinux, FreeBSD uye maARM masystem, OpenGL rutsigiro yakawedzerwa, odhiyo yakaburitswa kuburikidza neOpenAL, mamwe maturusi akawedzerwa mukugadzirisa, kamera inotenderera yakaitwa, XInput rutsigiro yakawedzerwa, rutsigiro rwemberi rwakawedzerwa,
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ivo vanogadzira chirongwa cheRE3 vakamhan'arwa neTora-Mbiri Inopindirana